Russian Tsar uPetru mina wayengajabule ngalendoda abadumile. Abaningi ezithakazelisayo futhi izinto engavamile wadla ifa kuyise, kodwa ngomnotho main, okuyinto osekhona nanamuhla, uye zanqwabelana yayo. Namuhla, akubona bonke abantu lapha ngakho ngokushesha ngithi lokho igama Museum kuqala wavula uPeter Omkhulu, kodwa cishe wonke umuntu uyazi ukuthi Curiosities. Kuyinto kule ndawo engavamile egcinwe zobuciko, sokuthi uqale lo mbusi omkhulu.
Ngo 1704, Peter ngasayina isimemezelo ephoqelela isibopho bonke abantu, ikakhulukazi abahwebi, ukuhamba eRussia nakwamanye amazwe, ukuletha esigodlweni zonke izinto engavamile. Ngoba zonke izimangaliso ke uthembise hle kokhelo. Ekuqaleni, zonke nemibukiso zazigcinwa eMoscow, kodwa ngemva enhloko-dolobha yesifundazwe kwaba Petersburg, wayekade washintshelwa lapho.
Lokho kuba Museum kuqala wavula uPeter Omkhulu ngu ekuqaleni engaziwa. Inkosi okwesikhathi eside eyicabanga igama efana ukuthi kuyinto wokugaklazeka engavamile, sikhumbuleke. Ekugcineni, sayeka ngesikhathi Kunstkammer, okuyinto elihunyushwe ngokuthi "Ukutadisha rarities."
Museum yokuqala wavula uPeter Omkhulu ngu, ukuthuthukisa kakhulu ngokucophelela, ngenza ayenakekela zonke amaqoqo udokotela-udokotela Areskin. Njalo manje bese ikhishwa izimiso ku iqoqo curiosities ehlukahlukene. Abantu kwakudingeka alethe inkosi yakwa kwakudala, ezifana izitsha, izingubo, izikhali, amathambo, amatshe. Indawo ekhethekile wanikezwa isilwane ezingavamile, izinyoni, nezilwane ne anomalies. Kuyaziwa ukuthi ngesikhathi esisodwa Kunstkamera atholwe amawundlu ngamehlo amathathu nesishiyagalombili, imvu nge izilimi ezimbili futhi amehlo ezine.
Ubani igama Museum kuqala wavula uPeter Omkhulu ngu ayaziwa kuphela eRussia kodwa ngalé kwemingcele yayo. Abahwebi njalo alethwe yinkosi izimangaliso kwezilwandle, ukungeza iqoqo omkhulu. Kuyo yonke le minyaka, inombolo yezinto selikhule sisondela ngokungenakuvinjelwa. Esikhathini Museum kwalethwa uyathola eyigugu bemivubukulo: imibhalo yesandla ubudala, izinto zasekhaya, igolide nezinhlamvu zesiliva. Bengilapha kanye herbarium, iqoqo Umumo elingavamile amagobolondo, lenqwaba izilwane, izimvemvane, izinyoni. Kwakukhona namalungu omzimba womuntu. Zonke oholele ukumangala futhi injabulo, kwalethwa Museum lokuqala evulekile 1 Petru.
Petr Veliky Wenza umsebenzi omkhulu wokuqoqa abavela ezweni lonke futhi abaningi bevela kwamanye amazwe, izinto engavamile. Imemori lokhu esitolo hhayi kuphela ezindongeni Museum, kodwa ziphephile ku Kunstkammer yingoba eziningi izinto inkosi ngokwayo. It ekuqaleni umuntu wadalwa kuphela Natur-room, eyayinekheli iqoqo zezilwane nezimila. Kwabe sekufika ngokomzimba, Myunts-, Kunst-amakamelo, bahambisa iqoqo izindondo, zemali kanye nezinye kwakudala. Ngemva kokufa zombusi wadala ehhovisi Imperial, anikezelwe Petru 1.
Yiqiniso, lapho ukuphila Museum yenkosi wabheka ngempela ezahlukene, kodwa namanje restorers nabasebenzi Museum bazama konke, eduze isakhiwo esisha kunguqulo yasekuqaleni. Namuhla, abadala kanye nezingane akwazi ukuthi Museum kuqala wavula uPeter Omkhulu ngu. Esikhathini Museum igcinwe lenqwaba amaqoqo, futhi bonke kakhulu ukufunda nokutadisha.
Aquapark "Almond Grove" - okungcono amanzi yokuzijabulisa isikhungo eCrimea
Ukuthenga ku Dresden Izibuyekezo
Taman amabhishi: incazelo, izithombe, izibuyekezo
Nomdlalo omusha. New Olympic Sports
Sezombangazwe Ekaterina Lahova: Biography, empilweni yakho, umsebenzi
Amanyuvesi European - izinga eliphezulu lemfundo
Indiza eqondile eya eJamaica
Methyluracyl wamafutha - isicelo umthamo